Mateu 6:34—“Musambozvidya Mwoyo Pamusoro Pezuva Rinotevera”
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Belize Kriol Bislama Bulgarian Cebuano ChiTetun Dili Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Fijian Finnish Frafra French Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabuverdianu Kannada Kikongo ya Leta Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwanyama Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Malayalam Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Myanmar Norwegian Oromo Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Romanian Russian Samoan Sango Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Thai Tsonga Turkish Tzotzil Ukrainian Valencian Vietnamese Waray-Waray Yoruba
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Mateu 6:34—“Musambozvidya Mwoyo Pamusoro Pezuva Rinotevera”
“Musambozvidya mwoyo pamusoro pezuva rinotevera, nekuti zuva rinotevera richava nekuzvidya mwoyo kwaro. Zuva rimwe nerimwe rinokwanirwa nematambudziko aro.”—Mateu 6:34, Shanduro yeNyika Itsva.
“Musafunganya nezvamangwana; nokuti mangwana achazvifunganyira zvawo. Zuva rimwe nerimwe rine nhamo dzaro dzakarikwanira.”—Mateu 6:34, Bhaibheri Dzvene muChiShona Chanhasi.
Zvinorehwa naMateu 6:34
Jesu, uyo akataura mashoko iwayo, akaudza vateereri vake kuti vaisafanira havo kunyanya kunetseka, kana kuti kunyanya kuzvidya mwoyo, nezvematambudziko ari mberi. Kuteerera yambiro yake kwaizovabatsira kuti vafunge nezvedambudziko rimwe chete panguva.
Jesu aisareva kuti hatifaniri kufunga kana kuronga nezveramangwana. (Zvirevo 21:5) Asi aitibatsira kuti tisanyanya kunetseka, kana kuzvidya mwoyo, pamusoro pezvingangoitika mangwana. Kuzvidya mwoyo kwakadaro kunogona kutibira mufaro wedu uye kutitadzisa kuisa pfungwa pane zvatinofanira kuita. Hatikwanisi kugadzirisa matambudziko achaitika mangwana nekunetseka nezvawo nhasi. Uye kakawanda kacho zvatinotyira hazviwanzoitiki kana kuti hazvizonyanyi kushata sezvataifungidzira.
Mashoko akapoteredza Mateu 6:34
Mashoko aya akataurwa naJesu mumharidzo yake yepagomo yakakurumbira, inowanika muzvitsauko 5 kusvika ku7 zvaMateu. Mumharidzo iyi, Jesu akatsanangura kuti kunyanya kuzvidya mwoyo hakuvandudzi upenyu hwedu kana kutiwedzera mazuva ekurarama. (Mateu 6:27) Akataurawo kuti patinoisa Mwari pekutanga muupenyu hwedu, hatifaniri hedu kunyanya kunetseka nezvamangwana. Mwari anochengeta zvirimwa nemhuka; achachengetawo vaya vanomushumira.—Mateu 6:25, 26, 28-33.
Verenga Mateu chitsauko 6 pamwe chete nemashoko emuzasi, mavhesi anoenderana nearimo, uye tarisa mapikicha.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Mateu 6:34—“Musambozvidya Mwoyo Pamusoro Pezuva Rinotevera”
Mateu 6:34 Inotsanangurwa—“Musambozvidya Mwoyo Pamusoro Pezuva Rinotevera”
ijwbv nyaya 4